Mootummaan laamsha’e, Wabii nagaa hin ta’u; ofijaaruun murteessaa dha. Kichuu
[ January 21, 2020 ] Urgent Appeal to stop the killings of innocent civilians in Oromia/Ethiopia	Africa
[ January 21, 2020 ] Oromoota Afran Qalloofi Siikkoo-Mandoo irratti, gocha hammeenyaa RIX fi Habashootaan raawwatamaa jiru	Radio
[ January 21, 2020 ] PP : Media phobia,backdoor meeting and well planned Sanctions on public right to information!	News
[ January 21, 2020 ] Ethiopia – Cholera outbreak (Ethiopian authorities, UNICEF, DG ECHO Partners) (ECHO Daily Flash of 21 January 2020)	Health
[ January 21, 2020 ] OMN: Lammiilee Jaamaayikaa Oromummaa filatan (Amajjii 20, 2020)	TV
[ January 21, 2020 ] Will Abiy Ahmed’s Bet on Ethiopia’s Political Future Pay Off?	Africa
[ January 21, 2020 ] Ethiopia Pushes Privatization to Give Its Economy a Sugar Rush	Business
[ January 21, 2020 ] Gondaritti Waltajjiin yeroo ayyaana cuubbatii qophaahe hirmaattota fudhatee jige.	Videos
HomeAfaan OromooVideosMootummaan laamsha’e, Wabii nagaa hin ta’u; ofijaaruun murteessaa dha.
Mootummaan laamsha’e, Wabii nagaa hin ta’u; ofijaaruun murteessaa dha.
“Siyaasni Mootummaa Itiyoophiyaa Kun Hedduu Wal Rukuteera!
Hojiin mootummaa Karaa Caasaa ODPtiin hojjetamaa jiru, Mootummaa Federaalaa waliin hariiroon ture dhaabbachuun Muummichi Ministeraa Itiyoophiyaa Dr.Abiyii Ahmad kophaa isaanii hafaniiru jedhaaruu, dhiiroo maaltu ta’aa jiraa?
Qajeelfamni hojii Dr. Abiyi caffee Oromiyaatti buusan hojitti hiikamuu hin dandeenye.
Caffeen Oromiyaa murtoo akkasii fudhachuu dideera; akka qajeelfamni gubbaa hojitti hin hiikkamneef kan godhaa jiru eenyuu?
Kan biraa ammoo kaabinoonni mootummaa ol’aanoo fi caasaan mootummaa gara gadii jiru ifatti addaan citee jira;kana hoo maaltuu godhee? Akkamitti addaan kutama?
Haala deemaa jiru kana irraa Ummanni Oromoo bal’aan hangam quba qabaa?
Kanaaf hoo cal’iaaniitumaan of gatuu dha moo waan akka sabaatti gochuu qabantuu jira? Kana ummanni Oromoo itti yaaduu qaba!”
WALGAHII WALISTOOTAA QOPHII ELEMO ALI TII FII SIMANA ,AFERAA DR ELEMO ALI TII FII ABBO JAMAL ALI, LEGEND IBSSA ELEMO AKKASUMATI FAMILI SAA HUNDA MANA DR ALI BIRRA TII FII ADDE LILII MAGALAA BUSHOOFTU OROMIYA
‘Ammas Humni Nageenya Mootummaa Miidhaa Nurraan Gahaa Jira’ Jiraattota Godinaalee Gujii
ከሩሲያ ከእስራኤል ከቱርክ ከኳታር ግብጽ… የሚመጣ የኃይማኖት እርዳታ ለቤትህ ችግር መፍቻ ሳይሆን ጣጣ ነው::
Oromoota Afran Qalloofi Siikkoo-Mandoo irratti, gocha hammeenyaa RIX fi Habashootaan raawwatamaa jiru
PP : Media phobia,backdoor meeting and well planned Sanctions on public right to information!
OMN: Lammiilee Jaamaayikaa Oromummaa filatan (Amajjii 20, 2020)
Gondaritti Waltajjiin yeroo ayyaana cuubbatii qophaahe hirmaattota fudhatee jige.